I-CBL-Mariner, ukusatshalaliswa kweMicrosoft's Linux kufinyelela kunguqulo 1.0 | Kusuka kuLinux
I-CBL-Mariner, ukusatshalaliswa kweMicrosoft's Linux kufinyelela kunguqulo 1.0
Okuhle | | Ukusatshalaliswa
IMicrosoft isanda kumemezela ukwethulwa kwe- inguqulo entsha yokusatshalaliswa kwakho kwe-Linux "I-CBL-Mariner 1.0" (Common Base Linux Mariner), emakwa njengenguqulo yokuqala ezinzile yephrojekthi futhi esetshenziswe kumaphrojekthi wakho wangaphakathi we-Linux, njenge-Windows Subsystem ye-Linux (WSL) kanye nohlelo lokusebenza lwe-Azure Sphere.
Kulabo abangayazi i-CBL-Mariner, sicela wazi ukuthi lokhu kungukusatshalaliswa kwangaphakathi kweLinux kwengqalasizinda yamafu nemikhiqizo nezinsizakalo zeMicrosoft. I-CBL-Mariner yakhelwe ukuhlinzeka ngeplatifomu engaguquguquki yalawa madivayisi namasevisi futhi izothuthukisa ikhono leMicrosoft lokuhambisana nezibuyekezo zeLinux.
Ukusatshalaliswa kuyamangalisa, ngoba kInikeza isethi ejwayelekile yamaphakeji ayisisekelo asebenza njengesisekelo sendawo yonke sokwenza ukugcwaliswa kwesiqukathi, bamba izindawo nezinsizakalo ezisebenza kungqalasizinda yamafu nakumadivayisi onqenqemeni. Izixazululo eziyinkimbinkimbi nezikhethekile zingakhiwa ngokungeza amaphakheji angeziwe ngaphezulu kwe-CBL-Mariner, kepha isisekelo sazo zonke lezi zinhlelo asiguquki, senza lula ukugcinwa nokulungiselela ukuthuthuka.
Isibonelo, i-CBL-Mariner isetshenziswa njengesisekelo se-WSL, enikezela ngezakhi zezitaki zemidwebo ukuhlela ukwethulwa kwezinhlelo zokusebenza ze-Linux GUI kusistimu esezingeni le-WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Isisekelo salokhu kusatshalaliswa asikashintshi futhi ukusebenza okunwetshiwe kwenziwa ngokufaka amaphakheji angeziwe nge-Weston composite server, XWayland, PulseAudio, neFreeRDP.
Uhlelo lwe-CBL-Mariner build pIvumela ukukhiqiza amaphakheji we-RPM ahlukile ngokuya ngamafayela we-SPEC namakhodi womthombo, nezithombe zohlelo lwe-monolithic kukhiqizwe kusetshenziswa ithuluzi lamathuluzi le-rpm-ostree futhi kuvuselelwe i-athomu ngaphandle kokugqekeza amaphakheji ahlukile. Ngenxa yalokho, izinhlobo ezimbili zokulethwa kokuvuselelwa ziyasekelwa: ngokubuyekeza amaphakheji ngamanye nangokwakha kabusha nokuvuselela sonke isithombe sohlelo. Ukusatshalaliswa kufaka kuphela izinto ezibaluleke kakhulu futhi kulungiselelwe inkumbulo encane nokusetshenziswa kwesikhala sediskikanye nesivinini sokulanda okuphezulu. Ukusatshalaliswa nakho kuqokonyiswa ngokufakwa kwezinqubo eziningi ezingeziwe zokwenza ngcono ukuvikelwa.
Iphrojekthi ithatha indlela "yokuphepha okuphelele ngokuzenzakalela", ngaphezu kokunikeza ikhono lokuhlunga izingcingo zesistimu ngokusebenzisa indlela ye-seccomp, ukubethela ukwahlukanisa idiski, ukuqinisekiswa kwepakethe ngamasiginesha edijithali. Ukugcwala kwesitaki, ukugcwala kwebhafa, nezindlela zokuvikela ifomethi yolayini zinikwe amandla ngokuzenzakalela phakathi nesigaba sokwakha.
Izindlela zamakheli ezenziwa ngokungahleliwe ezisekelwa ku-kernel zinikwe amandla yeLinux, kanye nezindlela zokuvikela ekuhlaselweni okuhlobene nezixhumanisi ezingokomfanekiso, kuyilapho izindawo zememori lapho izingxenye ezinedatha ye-kernel ne-module zikhona, imodi yokufunda kuphela isethwe futhi ukwenziwa kwenqatshelwe kwekhodi. Ngokuzithandela, amandla okuvimbela ukulayishwa kwamamojula we-kernel ngemuva kokuqalisa kwesistimu ayatholakala.
Izithombe ezijwayelekile ze-ISO azinikezwanga. Umsebenzisi kufanele akwazi ukudala isithombe ngezipikili ezidingekayo ngokwakhe (imiyalo yokufaka inikezwa i-Ubuntu 18.04). Indawo yokugcina yama-RPM akhiwe kuqala ongayisebenzisa ukudala izithombe zakho ngokususelwa kufayela lokumisa.
Umphathi we- i-systemd isetshenziselwa ukuphatha izinsizakalo kanye ne-bootstrapping nephakethe labaphathi be-RPM ne-DNF (vmWare variant TDNF) banikezwa ukuphathwa kwephakeji, ngenkathi iseva ye-SSH inganikwanga amandla ngokwakhona.
Ukufaka ukusatshalaliswa, kunikezwa isifaki esingasebenza kumodi yombhalo neyokuqhafaza. Isifaki sinikeza amandla okufaka ngamaphakeji aphelele noma ayisisekelo, anikeze isikhombimsebenzisi sokukhetha ukwahlukanisa idiski, ukhethe igama lomethuleli, futhi wakhe abasebenzisi.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-CBL-Mariner, ukusatshalaliswa kweMicrosoft's Linux kufinyelela kunguqulo 1.0
I-Sophos Acquired Linux Attack Protection Startup Capsule8
I-Photocall TV, inketho ethokozisayo yokubuka i-DTT noma kuphi